Semalt बाट सुझावहरू कसरी पाठ, अनावश्यक ईमेलहरू, र फोन कलहरू रोक्न
अधिकतम बेल, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, बताउँछ कि बोगस पाठहरु, अनावश्यक ईमेल, र कष्टकर विपणन कल चाँडै तपाइँको साँझ बर्बाद गर्न सक्छ। गत वर्ष, सूचना आयुक्तले ११4,००० भन्दा बढी अनावश्यक पदहरू र कष्टकर कलहरू सबमिट गर्‍यो। यो संख्या इन्टरनेटमा स्प्यामरको उदयका कारण लाखौंमा जाने अनुमान छ। तपाईंको खाताबाट बोगस पाठ सन्देशहरू र रद्दी ईमेलहरू मेटाउने अनुभव समय खपत मात्र होइन तर महँगो पनि हुन्छ।
अनावश्यक पाठहरू कसरी ब्लक गर्ने
के तपाईं स्पामर्सबाट बमबारी पाठहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ? आतंकको लागि कुनै ठाउँ छैन! यदि तपाइँ आक्रमणकर्ताहरूबाट पाठहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै भुक्तान संरक्षण बीमा (पीपीआई) अधिकारीहरू दावी गर्दछ भने, तपाईंले आफ्नो नेटवर्क प्रदायकलाई यसबारे रिपोर्ट गर्न विचार गर्नुपर्नेछ थप निर्देशनहरू प्राप्त गर्नका लागि। नेटवर्क प्रदायकहरूको राम्रो संख्याले सम्भावित ग्राहकहरूलाई नि: शुल्क विधिहरू प्रस्ताव गर्दछ स्प्यामरहरूलाई उनीहरूको उत्तेजित गर्नबाट रोक्न। मालिसियस पाठहरू रिपोर्ट गर्न, अनावश्यक पाठ to 77२26 मा फर्वार्ड गर्नुहोस् र प्रेषकको मान्य संख्या समावेश गर्नुहोस्। प्रमुख नेटवर्कहरू ग्राहकहरूलाई स्प्यामरहरू र ह्याकरहरू द्वारा दुर्व्यवहार हुनबाट जोगाउन अग्रसर रहेको छ। नीतिहरू र मापदण्डहरूले कसरी नेटवर्क प्रदायक र कम्पनीहरू सञ्चालन गर्छन्। एक मोबाइल प्रयोगकर्ताको रूपमा, तपाईं सूचना आयुक्तहरूको कार्यालयमा रिपोर्ट वा उजुरी गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीहरूले सम्झौताको सर्त तोडेको छ £ 500,000 भन्दा बढीको जरिवाना तिर्ने काम समाप्त हुन्छ। भर्खरै, ब्राडफोर्डमा संचालित एक क्रेडिट कम्पनीले six ,000०००० सम्म जरिवाना खर्च गरी अन्तिम छ महिनामा लाखौं कष्टकर पाठहरू पठाए।
कष्टकर फोन कलहरू कसरी ब्लक गर्ने?
टेलिफोन प्राथमिकता सेवा (TPS) स्प्यामरबाट कष्टकर विपणन कलहरू प्राप्त गर्ने मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै सहयोगी भएको छ। बिक्री र मार्केटिंग रणनीतिकारहरूबाट कलहरू रोक्नको लागि, तपाईंको मोबाइल प्रयोगकर्ता नम्बर टेलिफोन प्राथमिकता सेवाको साथ दर्ता गर्नुहोस्। एक पटक तपाईं TPS संगठनको साथ दर्ता गर्नुभयो कम्पनीहरू अब तपाईंलाई कल गर्न अधिकार छैन। यस सेवाका साथ दर्ता गर्न, T50० 95 to मा तपाईंको ईमेल ठेगानाको साथ "TPS" पठाउनुहोस्। केहि मिनेटमा तपाईले टेलिफोन प्राथमिकता सेवाबाट पाठ कन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन डाटाबेसमा थपिएको छ भनि पुष्टि गर्दै। केही फोन कम्पनीहरूले उपद्रव कलहरू रोक्न मद्दत पुर्‍याउने सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ। जे होस्, कल-ब्लकि product उत्पादनको स्थापनामा निर्भर चार्जहरू फरक हुन सक्दछन्।
कसरी स्पाम ईमेलहरू रोक्ने?
स्प्यामरबाट हरेक दिन नचाहिने ईमेलहरू प्राप्त गर्न प्रेरणादायक हुन सक्छ। समय बित्दै जाँदा इन्टरनेटमा स्प्यामरहरूको उदय बढ्दै गइरहेको छ। स्प्यामरहरूले अन्त-प्रयोगकर्ता डेटा पहुँच गर्न कबाड ईमेल प्रयोग गर्दछ। मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको रूपमा, अविश्वासन डोमेनबाट सुरु हुने ईमेलहरूलाई क्लिक गर्न र खोल्नबाट बच्नुहोस्। तपाईको ईमेल खातामा पठाइएको लि open्क खोल्नु भएपछि स्प्यामरले सूचना प्राप्त गर्दछ। अनावश्यक ईमेलहरूलाई तपाईंको इनबक्समा जानबाट रोक्न 'सदस्यता रद्द गर्नुहोस्' बटन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं विशिष्ट ईमेल ठेगानाहरूबाट नियमित ईमेलहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, ईमेल ठेगानाहरूलाई रोक्न तपाईंको लागि उत्तम शट हो। ठेगाना रोक्नाले भविष्यमा ब्लग गरिएको ईमेल ठेगानाहरूबाट सुरु हुने स्पाम फोल्डरमा पुग्न ईमेलहरू सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईंको एन्टि भाइरस प्रोग्राम अपडेट राख्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ जब यो तपाईंको मोबाइल फोन सुरक्षाको कुरा आउँछ। उपद्रवी कलहरू, बोगस पाठहरू, र नचाहिने ईमेलहरूले तपाईंको बेलुका खराब नगर्न दिनुहोस्। सुरक्षित पक्षमा हुनका लागि माथिको हाईलाइट ट्रिक्स र सुझावहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।